Ukungqubana kweChess – Dlala Cheats Online&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
Ukungqubana kweChess – Dlala Cheats Online&Ukuqhawula
Umlandeli weepuzzle? Vavanya izakhono zakho ezinengqondo ngeChess Clash! I-Chess ngumdlalo weqhinga elidala kwaye yenye yezona midlalo zidumileyo zebhodi ngalo lonke ixesha. Injongo yakho kukubamba iziqwenga zomchasi wakho kwaye ujonge ukumkani wabo.
Dlala kwi-intanethi kunye ne-duel kunye nabadlali abavela kwihlabathi liphela. Mema abahlobo bakho kwaye ucele umngeni kubo kumdlalo. Thetha kwaye utshintshiselane ngezipho nabanye abadlali.
Zama iindlela ezimbini zomdlalo - dlala imowudi ye-'Classic Chess' yomdlalo ophumlileyo okanye imowudi 'yeChess eKhawulezayo' yomdlalo okhawulezayo.. Khetha kwinani lamabala anikezela ngamabhaso omdlalo awahlukeneyo.
Vula kwaye uqokelele iiseti zechess ezintle ngokudlala umdlalo. Fumana imivuzo yasimahla yonke imihla!
Khuphisana nabanye abadlali kwiibhodi ezikhokelayo. Banyuse baye phezulu kwaye baphumelele amabhaso amakhulu.
Wonke umntu unokujoyina le adventure yeChess kwaye afunde ngokudlala bukhoma kunye nabachasi bokwenyani!
►Umdlalo wabadlali abaninzi kwi-Intanethi
►Imivuzo yemihla ngemihla yasimahla
►Ncokola nabadlali kwaye nitshintshiselane ngezipho
►Iindawo ezininzi ezinamabhaso ahlukeneyo
►Iindlela ezimbini zomdlalo — iChess yakudala kunye neChess eKhawulezayo
►Qokelela amaqhekeza eChess awodwa kunye neebhodi eziphezulu zeChess
►Khuphisana nabanye abadlali kwibhodi ekhokelayo
►Ixhasa ukudlala ngaphandle kweintanethi ngekhompyuter
Hlala ubukele izinto ezinomdla ngakumbi.
Khuphela ngoku kwaye ukhulule inkosi yeChess kuwe!
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Chess, Clash, Online, Dlala
← Umngeni weSquid kwi-3D – Ukukopa&Ukuqhawula Crash of Cars – Ukukopa&Ukuqhawula →
Imfazwe ye-Epic: Iitrone – Ukukopa&Ukuqhawula
Umdlalo weskwidi 3D 2022 – Ukukopa&Ukuqhawula
POKOPOKO Umdlalo 3 I-Puzzle Cheats&Ukuqhawula
Izilo & Iipuzzle: Ukuvuka – Ukukopa&Ukuqhawula
Isiqithi saseHlathi : Relaxing Game Cheats&Ukuqhawula